Kuyini agar? Kwaba le nkinga Culinary sinikezela sihloko lanamuhla. Phela, ngempela inqwaba besifazane abaye balizwa igama, kodwa hhayi wonke omunye wabo angamnika incazelo ecacile.
umkhiqizo onjalo chelating ejenti enamandla kakhulu. Ngokusho impahla yayo, kuba eziningana amashumi izikhathi mkhulu kune-gelatin ezivamile. Kumele kuqashelwe ukuthi le isithako isetshenziswa hhayi kuphela ukupheka lokulungiselela confectionery ehlukahlukene ukudla ezifana jelly, kodwa futhi njengendlela purgative mnene futhi ngempumelelo.
Kuyini agar, sithole. Ubani ofuna ukukhuluma kanjani futhi kusukela ukuthi likhiqizwa ngaluphi. Lo mkhiqizo, ehlanganisa ingxube ka polysaccharides agarose futhi agaropectin is etholwe isizinda kusuka ensundu ulwelwe obomvu (Gracilaria, Phyllophora, Ceramium, Gelidium et al.) Iyiphi sikhule White ne-Black iziLwandle, futhi ezimbili kuyiPacific Ocean.
Njengomthetho, umkhiqizo elinjalo uyadayiswa yini uhlobo powder olumhlophe-yellow noma ngesimo amapuleti. Ezweni lethu, agar, isithombe ongawabona kulesi sihloko, kubhekwa kwezinkulumo ezinamandla kakhulu esikhundleni herbal ngoba gelatin. Kufanele kuqashelwe ukuthi isithako enjalo lapho exutshwe amafomu amanzi ashisayo jelly sasivumela obukhulu. Le mpahla kwenza ukudla agar esisemqoka embonini confectionery.
By endleleni, lo mkhiqizo kungenziwa yizigaba ezimbili, okuyinto kuhluke kuphela indlela yokukhiqiza. Ngakho, ezitolo, ungathola oluphuzi omnyama powder elikhanyayo (noma njengoba ibizwa, amamaki aphakeme ezimhlophe).
Ukwazi kahle ukuthi agar, siphawula ukuthi abantu abaningi abamukela futhi wabasebenzisa emikhakheni eminingi yomsebenzi womuntu. ithandwa kangaka komkhiqizo lifanelwe sibonga izakhiwo zabo engavamile ngokomzimba futhi amakhemikhali. Ngakho, ezingeni lokushisa 90-100 degrees ke siphela ngokuphelele. Uma selehlile amayunithi 40, ngakho-ke impahla okuholela is kuguquka mass jelly. Ngezinye Ukupholisa egcwele umkhiqizo esinjalo iguqulwe ibe jelly aminyene futhi ukubhekana nezimo ezinzima.
By the way, asikwazi indiva iqiniso lokuthi yemifino buhlanjululwe powder ijeli thermoreversible. Ngakho, singasho ngokuqiniseka ukuthi ushintsho esimweni esisodwa (liquid) kwenye (obukhulu) kanye okuphambene nalokho kungaba kwenziwe ngokuphindaphindiwe. sici Kwethulwa kwenza lo mkhiqizo athandwa kakhulu embonini yezokudla.
Manje uyazi ukuthi agar-agar. ukupheka lakhe lisetshenziswa kakhulu. Futhi lokhu akukho ngozi, ngoba lo mkhiqizo iyasiza umzimba. Ngokusho ochwepheshe, ligcwele izakhi ezifana calcium, okusansimbi iodine. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo lapho ungeze lwenkomo olufakwe amanzi agar-agar, neqhaza esiphethweni ngomzimba womuntu ubuthi, kanye ngcono kakhulu isibindi, gallbladder futhi uqinise uqwanga nezicubu ligamentous.
Kufanele kuphawulwe ukuthi isithako yemvelo ayiqukethe semali kilojoule. Kule ndaba, ngokuvamile kusetshenziswa indlela yokudla ehambisana nempilo ahlukahlukene esheshayo kwesisindo. Njengoba zokupheka, eyisidalwa esinenkululeko chelating cishe ngaso sonke isikhathi esetshenziselwa ukwenza marmalade, jelly nojeli.
Indlela ukutshala agar?
Ngo ukupheka, agar agar e isetshenziswa kaningi imithi noma i-microbiology. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuyisebenzisa ukudala confectionery. Ngempela, ngokungafani kuya evamile gelatin osheshayo, alinaso ukunambitheka, akukho ukuhogela, umbala (kodwa kuphela uma uthatha umkhiqizo ukukhanya).
Kufanele kuphawulwe ukuthi ukuthandeka agar-agar embonini yezokudla ngenxa yokuthi ukuthi unakho izakhiwo elwa namagciwane. Ngenxa izitsha zabo lapho yengezwe, zingagcinwa isikhathi eside kunalawo okulungiselelwe usebenzisa gelatin ezivamile.
Indlela ukutshala agar? Ngaphambi ekulungiseleleni ukudla okunoshukela kanye neminye imikhiqizo ukudla, lo mkhiqizo kufanele njalo buhlanjululwe ngamanzi. Phela, powder noma ipuleti ifomu, akusiyo esekwazi ukubonisa lezo zimfanelo futhi izakhiwo ukuthi ithole udumo okukhulu ukupheka. Lokhu kudinga uthele lemali edingekayo umkhiqizo uthenge endishini encane bese uthele capacitance efanayo noma yiluphi uketshezi efudumele. Kungaba amanzi yasethafeni, umhluzi, futhi ijusi yezithelo.
Ukuze kuzuzwe ukuvumelana oyifunayo umkhiqizo osuphelile ka agar-agar Kunconywa ukuba asebenzise olinganise ezilandelayo: ithisipuni elilodwa inkomishi ketshezi ngayinye. Ngemva kwalokho, ingxube kufanele kube ngekota yehora kwesokunxele sibukela zigcwala. Ngokulandelayo, endishini lensimbi ivolumu mass gelatinous kwakudingeka ukuba agqoke ukushisa ongaphakeme, ibangele njalo, ukuletha okuqukethwe ukuba ethumbeni.
Lapho powder vzbuhshy noma ipuleti chaza ngokuphelele ngaphansi kwethonya okushisa aphezulu, kumele izitsha asuswe ipuleti futhi lemifanekiso mass ngokusebenzisa strainer esihle. Le nqubo kuyadingeka ukuze bawela umkhiqizo Chastikov angabikhona isidlo esiphelele ngephutha. Ngemva lolu ketshezi agar-agar efudumele Kumele uxhumeke kanye nazo zonke izithako, ivuse nabo kahle, uthele isikhunta ngaphambilini walungisa, bese cool ngokuphelele ekamelweni lokushisa noma kule esiqandisini.
Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke izitsha uzilungiselele umkhiqizo esinjalo, abe kuyaqina akhethekile kwabantu. Uma usebenzisa imimo engavamile ukwakha umkhiqizo amnandi, uzothola kophudingi yasekuqaleni kakhulu futhi enhle ukuthi unga ngeqholo samanje etafuleni zemikhosi.
Isinkwa: breads, ukubunjwa, izakhiwo ewusizo
Ukubika imibhalo ukuhamba ukuhlala ngayinye
Formwork - kuyinto ... kanjani ukwenza formwork?